ယုံကြည်ဖို့သာလိုတာပါ တခြားသူတွေဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာက အရေးမကြီးပါဘူး – Hlataw.com
ယုံကြည်ဖို့သာလိုတာပါ တခြားသူတွေဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာက အရေးမကြီးပါဘူး
သျှင်သွေး သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ ထံ မှ ဖုန်း ဖြင့် ကူးယူ ထားသော အပြာကားများ ကို နားကျပ် တပ်ကာ ဆေးလိပ်ဖွာ ရင်း ကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်ကာ အိမ် ခန်းဆီး ကို မှီပြီး ထိုင်လိုက်သည် ။ မိန်းမ ဖြစ်သူ အိတုံ က တော့ အခန်း ထဲ တွင် အိပ်မောကျ နေလေသည် ။ နွေ ရာသီ မို့အိုက်စပ်စပ် ဖြစ်နေသည် ။ သျှင်သွေး အပြာကား များကို စတင် ကြည့်ရှု နေရင်း ဇာတ်ဝင် ခန်း တစ်ချို့ ကြောင့် အမည်မသိ သော ခံစားမှု များ ဖြစ်လာ လေသည် ။ ထို ဇာတ်ဝင် ခန်း မှာ သာမန် ဇာတ်ကား များ နှင့် မတူဘဲ တမူထူးခြား နေသည့် အတွက် သျှင်သွေး စိတ်တွေ ထ လာ ကာ ပုဆိုး ထဲ မှ လီး ကိုပင် ပွတ်သတ် ပြီး သတိလွတ် ကာ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဂွင်းထု ပစ်လိုက်လေသည် ။ ထို ဇာတ်ကား ထဲ က အတိုင်း လုပ်ကြည့်ချင်စိတ်များ လည်း တစ်ဖွားဖွား ဖြစ်လာ လေသည် ။ ဖုန်းပိတ် သန့် ရှင်းရေး လုပ်ပြီး အိပ်ယာ ထဲ ပြန်ဝင် လာ လိုက်သည် ။ မိန်းမ ဖြစ်သူ က တော့ အိပ်မောကျ နေလေသည် ။
အိတုံ က လုံးကြီးပေါက်လှ ရင် က ထွား ခါး က သိမ် တင် က ကား နှင့် မြင်သမျှ ပုရိသ စိတ်ကြွ စရာပင် ။ ရုပ်ရည် က လည်း ချောမော သန့် ပြန့် သည် ။ အိတုံ ဘေး တွင် ဝင်လှဲ ကာ သူ မိန်းမ အိုးတွေ ကြည့်ပြီး ကြည့်ခဲ့မိသော အပြာ ဇာတ်ကား ကို ပြန်တွေးနေမိသည် ။ နောက် တစ်နေ့ရုံး တွင်ဖြစ်သည် ။ ဆေးကုမ္မဏီ တစ်ခု မှာ သျှင်သွေး နဲ့ သူငယ်ချင်း ခန့် မာန် မှာ ပစ္စည်းပို့တာဝန်ခံ များ ဖြစ်ကျပြီး အမြဲ အတူ တကွ တွဲလျှက် လုပ်ကိုင်သူ များဖြစ်ကျသည် ။ ” ဟေ့ကောင် သျှင်သွေး မနေ့ က ငါ ပေးတဲ့ ကား တွေ ကောင်းလား . ဟဲဟဲ မင်း ကြည့်ပြီး ငါ့မိန်းမ ဧကရီိကို လိုးချင်စိတ် ပေါက်သွားတယ် မလား ” ဟာမင်းကလည်း မဟုတ်တာ “ တကယ်တမ်း မှာ သျှင်သွေး လည်း ခန့် မာန် မိန်းမ ဧကရီ ကို ကြိတ်လိုး ချင် နေသူ ဖြစ်သည် ။ မဖြစ်နိူင်လို့ သာ ငြိမ်နေခြင်း ဖြစ်သည် ။ ခုလို ခန့် မာန် ကိုယ်တိုင်ပြော လာ တော့ သျှင်သွေး ဖွားဖက်တော် ထ တောင် သွားသည် ။
ငါက တော့ မင်း ငါ့ မိန်းမ ကို လိုး မယ် ဆို သဘောတူ တယ် ကွာ . . မင်း အိတုံ လေးလည်း ပြန် မျှ ပေါ့ကွာ… ” မင်း စကား ကို အတည်ပြောကွာ. မင်း တကယ် လုပ်ရဲလား… “ ” ဟ. တစ်ကယ်ပြောနေတာ . သျှင်သွေး မင်း နဲ့ ငါ အလဲအလှယ် လုပ်မယ် ကွာ . . “ ” ငါတို့မိန်းမ တွေ က လက်ခံပါ့မလား ကွ . မလွယ်ဘူး နော် . . “ ” ညက အပြာကား ထဲ ကလို လုပ်ပေါ့ . အချိန်တန် ရင် သူတို့ လည်း ချော်လဲ ရောထိုင်သွားလိမ့်မယ် “။ ” လုပ်ကွာ ကြာတယ် . မင်း အရင် စ လုပ် “ ” အိုကေ သယ်ရင်း . . “ အပေးအယူ မျှသည် နှင့် ရုံးဆင်း တာ နဲ့ ရင်ခုန်ခြင်း များစွာ ဖြင့် သျှင်သွေး အိမ်ပြန်လာခဲ့သည် ။ ဒီနေ့အရက်ဆိုင် တွင် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ရဲဆေး ဝင် တင် နေသည် မို့အိမ်ပြန် နောက်ကျ ခဲ့သည် ။ အိမ် အပြန် ခန့် မာန် ကို နောက် က လိုက်ခဲ့ဖို့ ပါ အစီအစဉ် စွဲ ကာ ပြန်လာခဲ့သည် ။ သျှင်သွေး အိမ်ပေါ် တက် လိုက်သည် နှင့် ဇနီးချောလေး က သနပ်ခါးအဖွေးသား နှင့် ပြေးကြို လေသည် ။
အိတုံ ဒီနေ့ပို လှနေသည် လို့ လည်း သျှင်သွေး မှတ်ချက် ချ လိုက်ပြီး သူမ နဖူးပြင် ကျယ်လေး ကို အနမ်းပေး လိုက်လေသည် ။ ခါးလေး ကို လည်း သိုင်းဖက် လိုက်လေသည် ။ ” အာ . ကိုရယ် . အိမ်ပေါက်ဝ ကြီးမှာ . အခန်းထဲ ဝင်မယ်ကွာ ” ” ဟုတ်ပါပြီ . မိန်းမ ကို အကို ဒီနေ့ပုံစံ တစ်မျိုးလေး ချစ် ချင်တယ် . . “ ” ဘယ်လို ချစ်မှာလည်း အကို ရ “ ” ဒီမှာ . . အိတုံ ရဲ့ . . “ သျှင်သွေး လွယ်အိတ် ထဲ မှ ကြိုး ခွေ လေး ကို ထုတ်ပြ လိုက်လေသည် ။ အိတုံ ထူးဆန်းစွာ သျှင်သွေး ကို ကြည့်ရင်း ” ကြိုး ကြီးပါလား . ဘာလုပ်ဖို့ လည်း အကို က . .” ” အော် . အချစ်ကို ချည်ပြီး လုပ်မလို့ ပေါ့ ” ” အို . ကြံကြံဖန်ဖန် အကို ရာ . ဒီတိုင်း လည်း ရတဲ့ ဟာ ကို . . “ သျှင်သွေး အိတုံ ကို အခန်းထဲ သွင်းကာ အိပ်ယာ ထဲ တွင် အဝတ်အစား များ အားလုံး တစ်ခု မကျန် ချွတ်ပေးလိုက်သည် ။ ကြိုးစ ကို ယူကာ အိတုံ လက်ကောက်ဝတ် နှစ်ဖက် ကို ချည်နှောင် လိုက်သည် ။ ပြီးနောက် ကုတင် ထိပ် တွင် တွဲချည်လိုက်သည် ။
အိတုံ က တော့ ဘာစကား မှ မပြောဘဲ ချစ် လင် သဘောကျ ငြိမ်သာ နေပေးလိုက်သည် ။ အိတုံ ပက်လက် လေး ဖြစ်သွား လေသည် ။ အိတုံ ပေါင်ကို ကွေးခိုင်းပြီး ခြေသလုံးသား လေးနှင့် တွဲချည်လိုက်သည် ။ နောက် တစ်ဖက် ကို လည်း ထိုနည်း အတူ လုပ်လိုက်သည် ။ ထို အခါ အိတုံ ပေါင်ဖြဲ ထား သည့် အနေအထား ဖြစ်သွားလေသည် ။ သျှင်သွေး ခါးကြား မှ အဝတ်စ အနက်လေး ထုတ်ကာ အိတုံ မျက်လုံးလေး ကို ပိတ်စည်း ပေးလိုက်သည် ။ အားလုံး အိုကေ သွားပြီ ဖြစ်သည် ။ သျှင်သွေး အခန်းဝ ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်းခန့် မာန် သူ့ မိန်းမ အိတုံ ရဲ့ ပန်းခင်းမို့ မို့ ကို သွားရည်ကျ မတတ် ကြည့်နေသည် ကို တွေ့ လိုက်ရသည် ။ သျှင်သွေး ခေါင်းငြိမ့်ပြသည် နှင့် အဝတ်အစား များ ချွတ်ကာ တိတ်တိတ်လေး ဝင် လာလေသည် ။ အိတုံ ခမျာ ဘာမှ မသိရှာပေ . အမှောင်ထု က သာ အမြင် ကို ပိတ်ဆို့ နေသည် ။ အာ . . . အ . အကိုရယ် . . အိတုံ ဖြဲထားသော ပေါင်ကြား မှ စောက်ပတ် အက်ကွဲချောင်း တစ်လျှောက်ကို။
လျှာဖြင့် သိမ်း အယက် ခံလိုက်ရသဖြင့် ညီးသံလေး ပင် ထွက်သွားလေသည် ။ ခန့် မာန် အိတုံ စောက်ပတ် ကို ဘယ်လိုမှ ဟန်မဆောင် နိူင်ဘဲ ကုန်း ယက်ပေးလိုက် လေသည် ။ ဆယ်ချက် လောက် ယက်ပြီး အိတုံ ပေါင်ကြား နေရာယူ ကာ စောက်ဖုတ် ကို သူ့ လီး နှင့် တေ့ကာ ဖိသွင်း ချ လိုက်သည် ။ အိတုံ ကတော့ သျှင်သွေး လုပ်နေသည် ဟု ထင်ပြီး ဖင်လေး ကြွကာ ကော့ပေးရှာသည် ။ ခန့် မာန် လီး တစ်ချောင်းလုံး အိတုံ စောက်ပတ် ထဲ မြုတ်ဝင် နေသော မြင်ကွင်း ကို သျှင်သွေး မျက်တောင်မခပ် ကြည့်ပြီး သဝန်တိုမှု ထက် ကာမစိတ် သာ ပိုတက်ကြွ လာ လေသည် ။ ခန့် မာန် သည်လည်း သူငယ်ချင်းမိန်းမ ရဲ့  စောက်ဖုတ် ထဲ လီး ဝင်နေပြီ ဆိုသော အသိကြောင့် လိင်တံ ပိုမာပြီး ကြီးလာ လေသည် ။ အသွင်းအထုတ် လေး ပုံမှန် လုပ်ပေး လိုက်သည် နှင့် အိတုံ ရင်နှစ်မွှာ လေးပါ နိမ့်ချည် မြင့်ချည် ဖြစ်ကာ နို့ သီးခေါင်းလေး များပင် ထောင်နေလေသည် ။
အား . အကိုရယ် ကောင်းတယ်ကွာ . စိမ် မထားဘဲ သွက်သွက်လေး လုပ်ပေးပါ . . အိ အရမ်း ယား နေပြီ ဟင့် . . ခန့် မာန် အိတုံ ကို ခပ်သွက်သွက် လေး ဆောင့်ပေးကာ နို့ အုံတွေ ကို နယ်ပေး နေလေသည် ။ နှစ်ဦးသား လည်း အရှိန်တက် လာ လေသည် ။ အမြင့်ဆုံး ကာမရမ္မက် ဖြင့် လိုးကောင်း ခံကောင်း ဖြစ်နေချိန် တွင် အိတုံ သူမ မျက်လုံး မှ ပုဝါနက် ကို ချွတ်ပေးခြင်း ခံလိုက်ရသည် ။ စောက်ဖုတ် ထဲ က လီးကြောင့် ဖီးလ်တက်ပြီး အရမ်းခံကောင်းနေသည် က တစ်ကြောင်း မျက်လုံး အစည်းခံထား ရသည် ကြောင့် တစ်ကြောင်းမို့မျက်လုံး ကို အားယူ ကာ ဖြင့် ဖွင့်လိုက်ရသည် ။ အိတုံ မြင်ကွင်း ကြောင့် ” အို ” ခနဲ ဖြစ်ကာ ရှက်သွေးများ ဖြာခနဲ ဖြစ်ပြီး မျက်နာလေး လွဲလိုက်ရသည် ။ သူမ စောက်ဖုတ် ထဲ ဝင် ထွက် နေသော လီး ပိုင်ရှင် မှာ သျှင်သွေး မဟုတ်ဘဲ သျှင်သွေး သူငယ်ချင်း ခန့် မာန် ဖြစ်နေသော ကြောင့် ထူပူသွားသည် ။ စောက်ဖုတ် ကတော့ ပိုပြီး တောင် ခံကောင်း နေမိသည် ။
အကို ဘယ်လို ဖြစ်ပြီး ဒီလို ဖြစ်သွားရတာလည်း ” ချစ်လေး စိတ်လျော့နော် . အခြား ဘာမှ မတွေးနဲ့ ကိုယ် ခွင့်ပြုထားလိုက်တာပါ . ချစ် အဆင်ပြေတယ်မလား “ ” ဟင်း . သူများ က ခု စကားပြောရင်း နဲ့တောင် အလိုးခံနေရတာ မထူးတော့ပါဘူး ပြေရမှာပေါ့ . “ ခန့် မာန် လည်း ရင်ထဲ က အလုံးကြီးကျကာ အရှိန်ပြန် လျော့ပြီး ” မင်္ဂလာပါ မအိတုံ ” ” ဟုတ် မင်္ဂလာပါ . . “ ” ကောင်းတယ် မလား အကို လိုးပေးတာ “ ” ကောင်းတယ် . အိ လည်း တစ်စိမ်းယောင်္ကျား နဲ့ ခံကြည့်ချင်နေတာ အတော်ဘဲ . ယောင်္ကျား ကျေးဇူးဘဲ “ ” မလိုပါဘူး ချစ်ရယ် . ဒီနေ့အဖြစ်အပျက် အတွက် ကို လုံးဝ မငြိုငြင် စေ ရပါဘူး “ အိတုံ ကို ကြိုးတွေ ဖြေပေးလိုက်သည် ။ သျှင်သွေး လည်း ကာမစိတ်တွေ ထ နေသည် ။ အိတုံ ကလည်း ဏှာထန် သော မိန်းမ ဖြစ်သည်မို့ ခံစားချက် တွေ အစွန်းရောက် ကုန်ကျသည် ။ သျှင်သွေး နဲ့ အိတုံ အပြာကား တွေ ကို အတူကြည့်ခဲ့ဖူးသည် ကို သတိရပြီး ။
မိန်းမ ချစ်လေး ခန့် မာန် ကို သခင် အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုလိုက်ပါလား . ” အိ လည်း အဲ့ကား ထဲကလို ရင်ခုန်ဖူးပါတယ် . အကို နဲ့က လင်မယား ချင်းဆိုတော့ ဖီးလ်မလာဘူး ဒီက စိမ်းသူ နဲ့ ဆိုတော့ လုပ်ကြည့်ချင်တယ် “ ” ကဲ ခန့် မာန် အိတုံ ကို မင်း ရဲ့ ကျွန် မလေး အဖြစ် ပေးတယ်ကွာ . ဧကရီ ကိုလည်း ပြန်ပေး နိူင်မလား “ ” အဆင်ပြေပြီ သာ မှတ်တော့ . . ကဲ အိတုံ အခု ငါက မင်း သခင် ဘဲ ဒူးထောင်ပြီး ငါ့ လီး ကို စုပ်ပေးစမ်း ပါအုန်း “ ခန့် မာန် ကုတင်ပေါ် မတ်တတ် ရပ်လိုက်သည် ။ အိတုံ ဒူးလေး တုတ်ကာ မျက်နာရှေ့  က ခန့် မာန် လီး ကို ဒစ်ကလေး မှ အစပြု ကာ ငုံစုပ်လိုက်သည် ။ ” ကောင်းတယ် . ငါလိုးမလေး သေချာစုပ် ” ခပ်ကြမ်းကြမ်း အသုံးအနူန်း များ နှင့် အတူ အိတုံ ဆံပင် ပါ ဆောင့်ဆွဲ ခံလိုက်ရသဖြင့် စိတ်တွေ ထကြွလာကာ လိင်တံ တစ်ချောင်းလုံး ကို တပြွတ်ပြွတ် နှင့် စုပ်ပေးလိုက်လေသည် ။ ” ဟေ့ကောင် သျှင်သွေး မင်း ငါ့အိမ်သွားကွာ . မင်း ကြည့်လှော်ထား နှင့် ငါ လိုက်ခဲ့မယ် “။
ဧကရီ တစ်ယောက် ထဲလား မင်း အိမ်မှာ ” ဒါပေါ့ကွ . မင်း အဆင်ပြေအောင် ချုပ်ထား ငါ လိုက်ခဲ့မယ် “ ” အေးအေး မင်း ငါ့မိန်းမ ကို စွတ်ဗြင်း မနေနဲ့အုန်း “ သျှင်သွေး တစ်ဖက် လမ်း မှ ဧကရီ အိမ် ကို ထွက်လာ ခဲ့လေသည် ။ ခန့် မာန် အိတုံ ကို ဖင်ကုန်း ခိုင်းကာ အားရပါးရ အိတုံ အိုး ကို ရိုက်ကာ လိုးလေသည် ။ တင်သား တွေ အရိုက်ခံနေရ သဖြင့် အိတုံ တဏှာမီး တွေ တောက်ကာ နောက်ပြန် လေး ပစ်ပစ် ပေးမိလေသည် ။ ” အင့် . အား အား အ “ အသံမျိုးစုံ နှင့် လိုးပွဲ ကို မီးကုန်ယမ်းကုန် ဆင်နွှဲနေလေသည် ။ ” ငါလိုးမလေး ခံလို့ ကောင်းလား “ ” အား . . ဆွေမျိုးမေ့ ဘဲ တော်ရေ ” ” ငါက အခု မင်း သခင်နော် . ငါ ခိုင်းတာ အကုန် မင်း ခံရမယ် . မနာခံရင် အပစ်ပေးမှာ ” ခန့် မာန် အိတုံ ကို တစ်ချီ ပြီးအောင်လိုးပြီး အိတုံ ကို ကြိုးဖြင့်တုတ် ပါးစပ်ကို ပိတ်ပြီး စောက်ပတ် ထဲ အသင့်ဝယ် လာတဲ့ မော်တာလီးတု ကို ထိုးသွင်းကာ ကြိုးချည် ထားလိုက်သည် ။
တံခါးခေါက်သံ ကြောင့် ဧကရီ အိပ်မူးစုံမွား ဖြင့် ထ လာကာ အိမ်တံခါး ဖွင့်ပေးလိုက်လေသည် ။ ” အော် . . ကိုသျှင်သွေး ပါလား ကိုခန့် မာန် ရော “ ညဝတ် အကျီင်္လေး နှင့် လှချင်တိုင်း လှနေသော ဧကရီ ခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်း ကို သျှင်သွေး စူးစိုက်ကြည့်ကာ တံထွေး မြိုချ လိုက်ရသည် ။ ” ခန့် မာန် ကျွန်တော့် အိမ်မှာပါ “ ” သူ က အဲ့မှာ ဘာလုပ်နေတာလည်း “ သျှင်သွေး သူမ ကို သိမ်းဖက်ကာ အိမ်ထဲ တွန်းခေါ်သွားပြီး သူမ နားလေးကို ကပ်ကာ ” အိတုံ ကို လိုးနေတယ် ” ” ဟယ် . . ” သျှင်သွေး ဧကရီ ကို ဖက်ကာ လည်တိုင်တွေ ကို အတင်းနမ်းလိုက်လေသည် ။ ဧကရီ အနည်းငယ် ရှုန်းကာ ” ရှင် လာ လိမ်မနေနဲ့နော် ကျွန်မ မယုံဘူး ” ” ဒါဆို မင်း ငါ့အိမ် လိုက်ခဲ့လေ . ဟုတ်မဟုတ် “ ” ဒါဆို သွားမယ်လေ ” သျှင်သွေး နှင့် ဧကရီ အိမ်ကို ကူးလာ လိုက်လေသည် ။ အိမ်တံခါး ခေါက်လိုက်သော အခါ ခန့် မာန် လာ ဖွင့်ပေးလေသည် ။ အထဲ က ထိုင်ခုံတွင် အိတုံ လီးတု တန်းလန်း နှင့် ဖြစ်ပျက်နေလေသည် ။
သျှင်သွေး ဧကရီ လက်နှစ်ဖက် ကို ချုပ်လိုက်သလို ခန့် မာန် ကလည်း ဧကရီ ညဝတ်ဂါဝန် အောက်မှ အတွင်းခံလေး ကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်နံ့လေး သင်းနေသော ပင်တီ လေးကို ယူ၍ အိတုံ ပါးစပ် ထဲ ထိုးထည့်လိုက်သည် ။ အိမ် ထုတ်တန်း တွင် ကြိုး တစ်ချောင်း ဆွဲကာ ဧကရီ ကို ချည်ထား လိုက်ကျသည် ။ ခန့် မာန် အိတုံ ကို ဖက်ကာ သျှင်သွေး နှင့် ဧကရီ ကို ကြည့်ရှု နေလေသည် ။ သျှင်သွေး ဧကရီ နို့ တွေကို နယ်ပြီး ပင်တီ မဲ့နေသော စောက်ပတ် မှ အစိလေး ကို နောက်မှ သိုင်းဖက်ကာ နယ်ပေး လေသည် ။ ပြီးနောက် ပေါင်ကြား သို့ခေါင်းပြန်ဝင်ကာ စောက်ပတ် ယက်ပေး လိုက်ပြန်သည် ။ အားရအောင် ယက်ပြီး မှ ဧကရီ သင်တိုင်းဂါဝန် လေးကို ဖြဲဆုတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဧကရီ ပေါင်တစ်ဖက် ကို မပြီး သျှင်သွေး သူ့ လီးကို ကိုင်ပြီး အဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်လေသည် ။ ” အ အမလေး ကိုသျှင်သွေး ဖြည်းဖြည်း ” ” စိတ်ချပါ ဧကရီ ရဲ့ ” အသွင်းအထုတ် လေး မှန်လာတော့ ဧကရီ ခံလို့ ကောင်း လာ လေသည် ။
သျှင်သွေး ပုံစံ မပြောင်းတော့ဘဲ ထို ပုံစံ အတိုင်း တစ်ချီ ပြီးအောင် လိုးလိုက်သည် ။ ပြီးနောက် အိတုံ ၏ ပင်တီ ကို ယူကာ ဧကရီ ပါးစပ် ထဲ ထည့်ပြီး ပါးစပ်ကို တိပ်ဖြင့် ကပ်လိုက်ကာ နောက် လီးတု တစ်ခုဖြင့် စောက်ဖုတ် ထဲ ထိုးသွင်းကာ ကြိုးဖြင့် တွဲထားလိုက်သည် ။ ခဏကြာသော် ခန့် မာန် နှင့် သျှင်သွေး ဘီယာတစ်ဘူး စီ ဖောက်သောက်ပြီး သူမ တို့ ကို ကြိုးဖြေ ပေးလိုက်ကျပြီး လီးစုပ်ခိုင်း ကျသည်။ အိတုံ နှင့် ဧကရီ ပညာကုန်သုံးကာ အားကျမခံ တစ်ယောက်လင် ရဲ့ လီး တစ်ယောက် အပြတ်စုပ် ကာ ပြိုင်နေကျလေသည် ။ ပြီးနောက် ခန့် မာန် အိတုံ ကို ကုန်းခိုင်းပြီး နောက်မှ လိုးလေသည် ။ ခန့် မာန် လီး သူမ စောက်ဖုတ် ကို လိုးနေ စေကာမူ သျှင်သွေး လီး ကို ဧကရီ ထံ မှ လုစုပ်လိုက်သေးသည် ။ အိတုံ ဏှာထန်ချက် ကို ခန့် မာန်ပင် လက်ဖျားခါလေသည်။
သျှင်သွေး လည်း ဧကရီ ကို မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းကာ ခန့် မာန် ပခုံး ကို လက်ထောက် ခိုင်းပြီး အနောက်မှ စောက်ဖုတ် ကို လိုးလိုက်လေသည် ။ ဧကရီ အောက်မှာ အိတုံ ကို ပက်လက်လှန် ပေါင်ဖြဲပြီး ခန့် မာန် လိုးလျှက်ရှိနေသည် ။ ပြိုင်တူ အပြိုင်လိုးကျရင်း နှစ်တွဲလုံး သံစုံ အော်ဟစ်ကာ ပြိုင်တူ ပြီးကုန်ကျလေသည် ။ ထိုနေ့ မှ စပြီး နှစ်တွဲလုံး တစ်ယောက် မယား ကို တစ်ယောက် တရားဝင် လိုးကျ သလို အဆင်ပြေသလို တူးဝမ်း လည်း ဆွဲဖြစ်ကျလေသည်… ပြီးပါပြီ